I-Aashraya kwiGanga: I-Himalayan Farmstay Retreat - I-Airbnb
I-Aashraya kwiGanga: I-Himalayan Farmstay Retreat
Ifama sinombuki zindwendwe onguDepi
I-Aashraya yindawo ekhethekileyo yokubuyela e-Himalayan ebekwe elunxwemeni lomlambo iGanga, kwilali encinci emalunga neekhilomitha ezingama-45 ngaphambi kweRishikesh. Ijikelezwe buhlaza obuluhlaza, isandi esiphuphumayo somlambo, kunye neengoma ezimnandi zeentlobo ngeentlobo zeentaka, le ndawo ifanelekile kumthandi wendalo kuwe. Sinezindlu eziyi-03 ezigqwesileyo ezinomoya opholileyo/ezishushulwe ngaphakathi kunye neefestile ezinkulu zeglasi ezikuvumela ukuba uthobe kweyona mbono imangalisayo ye-180-degree yendawo engqongileyo.
I-Aashraya yi-6000 sq. ft. Ukwakhiwa kwamatye okomileyo, okubandakanya ii-cottages ze-03, indawo yokutya eqhelekileyo kunye nekhitshi. Ibekwe ngendlela enjalo, ukwenza ngcono iimbono, ukukhanya kwelanga kunye nobumfihlo.
Ukuba uyakuthakazelela ukuphila impilo esempilweni, ukuhamba luhlaza, ingqikelelo yokuphinda usebenziseke ngokutsha/ukwenza i-upcycling phantse yonke into kunye nokuba yinto enye nendalo, le yeyona ndawo ifanelekileyo kuwe.
Igadi yethu iyonke yi-100% yezinto eziphilayo, siphinda sisebenzise yonke into kwaye akukho nto ishiya indawo yethu njengenkunkuma. Uphahla lugqunywe ngeengxowa zejute ezisetyenzisiweyo. Ukuza kuthi ga ngoku sityale kufutshane nemithi engama-200 ebandakanya ubukhulu becala imithi yeziqhamo kwaye uninzi lokutya kwethu kulinywa kwifama yethu yobuqu.
I-cottage nganye inebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye. I-cottage enkulu ineebhedi ezininzi zokubeka iqela elipheleleyo le-12 pax. Sizibekele imigangatho ephezulu kakhulu ngokwethu. Umbono yayikukusebenzisa isamente encinci kangangoko kwaye akukho RCC. Sasifuna ukusebenzisa umbandela wasekuhlaleni omninzi kangangoko kunokwenzeka. Onke amagumbi ethu anesixhobo sokubasa iinkuni kwaye siqokelela iinkuni ezifileyo ukuze sizitshise kwizifudumezi zamagumbi ethu.
Umthi wonke osetyenzisiweyo uthathwe kwaMaruti Udyog (umthi wokupakisha). Ubonelelo lwethu lwamanzi luphuma kumthombo wamanzi ahlaziyekileyo omalunga neekhilomitha ezi-2 kude kusetyenziswa imigaqo yomxhuzulane.
Ngaphandle kwezinto ezinomtsalane eRishikesh, zininzi izinto onokuzenza eAashraya -
Ukuphumla, ukulima, ukuncedisa efama (sikhuthaza ukuthatha inxaxheba efama), ukucamngca kunye ne-yoga elunxwemeni, i-hydrotherapy kwi-waterfall enhle (eku-800 m ukusuka kwindawo yethu), ukuhamba kwindlela yokuhamba ye-Badrinath yamandulo okanye ukuthatha nje uhambo. hamba ngokuzolileyo kwiidolophana ezikufuphi nasetempileni.
Sikwalungiselela iindibano zocweyo zosuku e-Aashraya ukufundisa abantu ngokukhwela ibhayisekile, ukulima okuzinzileyo, impilo ezinzileyo, ubomi obungafunekiyo, njl.njl. Singakuvuyela ukwabelana, ukufunda, kunye nokwandisa ulwazi lwethu kunye nawe.
Umbuki zindwendwe ngu- Depi
Ndihamba kakhulu ukuze ndingabikho ngalo lonke ixesha. Nangona kunjalo, ukuba ndikhona, kuya kuluyolo ukunxibelelana nawe kwaye wabelane ngamabali.
Siqeshe abasebenzi basekuhlaleni kwaye abasebenzi banokusebenzisana ngesiNgesi esaphukileyo.